Avianca ụgbọ elu abanye na 100th afọ nke ọrụ na-enweghị nsogbu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Avianca ụgbọ elu abanye na 100th afọ nke ọrụ na-enweghị nsogbu
Na 2019 Avianca Airlines na-eme emume ncheta afọ 100 ya. Ọ na-akwado ọnọdụ ya dị ka ụgbọelu kacha ochie na America na onye kasị ochie n'ụwa na arụmọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị.
Iji tọọ ntọala maka narị afọ sochirinụ, Avianca chọrọ ịbawanye ọnụnọ ya na Europe ma gaa n'ihu na-enye ahụmịhe pụrụ iche nye ndị ahịa ya nke teknụzụ kachasị mma na-akwado.
"Anyị na-enyocha ohere nke ịgbakwunye London ugboro abụọ na nso nso," ka Hernan Rincon, CEO na Executive President nke Avianca Airlines na-ekwu. “Banyere ebe ọhụụ, Zurich dị ka ihe na-adọrọ mmasị dị ka ebe ọzọ na Europe n’ihi ọnọdụ ya na etiti Europe. Ọzọkwa, ụgbọ elu ahụ na-atụlekwa Rome na Paris, ”gbakwunyere.
Avianca Airlines na-ekwusi ike na Europe site na omume dị iche iche:
1. New Boeing 787: N’ọnwa Ọktọba 2018, Avianca natara Boeing 787 nke iri na atọ, nke ọ na-eji naanị maka ụgbọ elu na Europe. Flegbọ mmiri ya bụ otu kachasị ọhụrụ na Amerịka-dị afọ asaa na nkezi- yana ụgbọ elu ya niile na kọntinent a na-arụ ọrụ na Boeing 787, otu n'ime ụgbọ elu kachasị ọhụrụ n'ụwa.
Aircraftgbọ elu a nwere ike ịnabata ndị njem 250, 28 na klaasị azụmaahịa na 222 na klaasị akụ na ụba. Ntughari mgbanwe ya, ya na teknụzụ dị egwu, na-ebelata mmetụta nke ike ọgwụgwụ na ọdụ ụgbọelu. Na mgbakwunye, ọ nwere usoro ihe nkiri ụgbọ elu na-agbanwe agbanwe, nke amarala dị ka nke kachasị mma na Latin America. Ha niile na-atụnye ụtụ na ahụmịhe pụrụ iche.
2. networkzọ ntanetị: Site na Bogota, isi ụgbọ mmiri Avianca, ndị njem Europe nwere ohere karịrị ebe 100 n'ime America dịka: Cusco na Peru, Galapagos na Ecuador, San Jose na Costa Rica, Medellin na Cartagena na Colombia, tinyere ndị ọzọ. Na November 17th, ọdụ ụgbọ elu ahụ malitere ụzọ Munich - Bogota. Ihe ụgbọelu bụ ụgbọ elu Latin America mbụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu a.
A mara Avianca dị ka ụgbọ elu kacha mma na South America: ma na ogologo oge na ụgbọ elu ụgbọ elu nke Skytrax, Onye Ndụmọdụ Njem, APEX, n'etiti ndị ọzọ, n'ihi ahụmịhe onye njem ya nwere site na ọrụ ala na ọdụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ ụgbọ elu.
Zimbabwe họpụtara ndị nnọchi anya njem nlegharị anya
FAA mechiri ọdụ ụgbọ elu LaGuardia nke New York, kwụsị ụgbọ elu niile na-abata